[MMAnime] Nomad: Megalo Box2: Nomad: Megalo Box 2
Megalo Box ရဲ့ Season 1 မှာဆိုရင်တော့ Yuri ကို "Gearless" Joe က အနိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု Season မှာတော့ နာမည်က ပြောင်းလဲလာတာမြင်ရပါတယ်။ "Nomad - Megalo Box 2" ပါ Nomad က ဘယ်သူလဲဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ သိခဲ့တဲ့ Junk Dog / Joe ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဘာလို့နာမည်ပြောင်းခဲ့တာလဲ? ဒါကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဗျ lifestyle တစ်မျိုးပြောင်းလဲလာတာကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာပါ Nomad ဟာဆိုရင် ကြိုးဝိုင်းတွေ လှည့်ပတ်ထိုးနေတဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဘဝနဲ့ နေနေတာပါ သူဘာလို့ အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲ? သူရဲ့နည်းပြ နဲ့ ကောင်လေးကရော ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲ? သူ‌ဘာတွေပြောင်းလဲ‌သွားတာလဲ? ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ?